Yintoni ongakhetha ngayo isibane setafile kubantwana besikolo?
Ukulungiselela unyaka wesikolo esitsha, abazali besikolo bazama ukubanika zonke izinto ezifunekayo. Kodwa ngaphezu kweencwadi zokubhala, ipenki kunye neepensele kunye neencwadi zezifundo, into ebalulekileyo yintlangano efanelekileyo yomsebenzi. Ngokukodwa kubandakanyeka nabafundi beeklasi ezincinci abangakhange bakwazi ukujongana nale micimbi enzulu. Isibane sesibonakaliso esibaluleke kakhulu kwindawo yokusebenza yabantwana abadala nabantwana.
Kodwa isibane sesibane sihlukile, kuba akuzona zonke izixhobo zokukhanyisa ezinokukwazi ukuhlangabezana nemimiselo yococeko echaphazela umbono: ukukhanya okwaneleyo kwendawo yokusebenza, ukukhanya kokudluliselwa, ukukhuselwa kwamehlo ukusuka ekukhanyeni okuthe ngqo kunye nesikhokelo salo. Enyanisweni, ukukhethwa kwesibane setafile kufanele sihanjiswe ngokungathí sina, njengoko abantwana besikolo bachitha ixesha elide kwidesksi, kwaye akunakwenzeka njalo ukwenza izifundo ekukhanyeni kwemvelo, kwaye isibane sokufunda "esingalunganga" singonakalisa umbono womntwana. Iingcebiso ezinikezelwe kwinqaku ziya kukuxelela ukuba ngubani ozakukhetha isibane sesithebhile kwisikolo esikolweni.
Iimpawu zolu phawu
Xa ukhetha isibane setafile, kufuneka ubeke ingqwalasela kwimilo yalo. Hayi ukuba unalo uhlobo lwe-trapezoid, oko kukuthi, lincinci kwisiseko kunye nobubanzi kwimida. Ngulo mbono onika ukukhanyisa okuphezulu nokukhululekile kwamehlo. Namela umbala we-plafond, ongabalulekanga. Imibala ekhanyayo iya kuphazamisa ingqalelo yomntwana ekwenzeni umsebenzi wesikolo, ngoko ke ukhetho lufanele luhlale kwiibane zeethala zeetoni ezizolile. Umbala ophezulu kakhulu unobumba, obangela ukuba luncedo kumboniso.
Unokufumana iiflans ezenziwe ngezinto ezahlukeneyo. Xa ukhetha i-plafond kwiplastiki, jonga ubuso bayo ngaphakathi: isibane asifanele sibe siseduze neendonga zalo mhlaba, kwaye kufuneka sibe ncinane kunaloo mhlaba. Ngaphandle koko, kusetyenziswe ixesha elide lokulungisa ukukhanya, iindonga ze-plafond ziya kuqala ukunyibilika, ezingakhokelela emlilweni. I-plafond, eyenziwe ngesinyithi, nayo inokungaphumeleli kwayo: ukushisa okukhawulezayo kwesibane. Umntwana unokutshiswa xa efuna ukukhupha umlenze.
Xa ukhetha isibane setafile, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kumthombo wokukhanya. Nguye oya kuphazamisa umbono womntwana wakho. Ngoku izibane ze-incandescent eziqhelekileyo zithatyathwa ngambane izibane, ezineempawu ezifana nokugcina amandla kunye nobushushu obuncinane. Kodwa izibane zolu hlobo azihlali zinika ukukhanya okulungileyo, okumele kuhambelane nelanga. Ngoko ke, ukukhethwa kwesebe yedeski kufuneka kumise kulowo onika ukukhanya okuluhlaza okonkqobile, kuphela isibane siza kuba neendleko ezincinci.
Kungcono ukhethe iibhola zokukhanya zombane zokulungiselela ukukhanya, ezingathinti umboniso wakho. Amandla enomboro kufuneka abe ngu-100W, kwaye ukuba ufuna amandla angaphantsi, unokumane ubeke endaweni ye-bulbs ukukhanya.
Xa ukhetha isibane, qwalasela le ngongoma ebalulekileyo: i-bulb ayifanele ihambe ngaphaya kwemida yesibane sesibane, kuba isibane esisikhuphayo siya kumbamba umntwana, kwaye oku, oku, kunempembelelo engalunganga emehlweni.
Kwakhona, musa ukupenda i-bulb ekhanyayo kunoma yimuphi umbala, apho apho ukukhanya kuya kukhanya kwaye amehlo omntwana aya kubakho uxinzelelo kwaye ngokukhawuleza athathele. Ukulahla ukuthengwa kwesibane se-fluorescent esinika ukukhanya okuqhaqhaqisayo okungonakalisayo kwiso.
Iimpawu zeLamp Lamp Design
Ewe, umbuzo woyilo kunye neendlela eziphambili zisekondari, kwaye kuxhomekeke kumgangatho wegumbi, kwintsikelelo yomthengi, kunye nakwizikhundla zemali. Khetha isibane setafile kunye ne-tripod elandayo eyakukuvumela ukuba ulungise ukukhanya kwindawo efanelekileyo kuwe. Wena ngokwakho unokutshintshela ukukhanya komphezulu ngokukhawuleza okanye ukususa isibane. Ukuphakama kwesi sikhewu, ukukhanya akugqithisi kwaye indawo yokukhanya iyanda.
Ii-tripods zezibane zinefowuni kwaye zinezandla. Kodwa ezi zilandelayo azikho ixesha elide, njengoko la "mathambo-amathambo" ahlala ehla, ngakumbi ukuba umntwana wakho unethambeko lobugcisa.
Isiseko sezibane zetabhile, ukuma, akufanele kukhanye okanye kuluhlaza. Ngenxa yokuba isibonakaliso sokukhanya siya kubonakaliswa kwaye "sibethe" emehlweni omntwana, okwenza umthwalo ongafunekiyo kwamehlo. Izixhobo ezinokulungelelanisa kakhulu, ezinokuzibopha. Isibane esinjalo asifumani isikhala esikhulu, siqhotyoshelwe kuyo nayiphi na indawo, kwaye iyakutshintshelwa nayiphi na indlela.
Kubalulekile ukuqonda ukuba isibane esinye sezibane asiyi kukwazi ukusebenzela etafileni, kufuneka uquke ukukhanya okuqhelekileyo, okungafanelekanga.
Ngaba unqume ukuba yeyiphi isibane esikolo esikhethayo? Emva koko uye esitolo! Jabulela ubuncinane bakho!
Ukuqaphela ukulungela umntwana esikolweni
Izibongo esikolweni. Indlela yokujongana nale nto?
Imizuzu yeentlanganiso zabazali kwi-kindergarten
Izambatho kunye nezicathulo zeenkulisa
Penne nge-carrot sauce
Isitashi kubantwana bokutya
ULeonardo DiCaprio wahlula iindlela kunye noKelly Rohrbach
U-Alexander Malinin wabamba ubaba wakhe ngamanga, ividyo
Uhamba ngeesalmon kunye nemifuno
U-Anna Kasterova - uphawu oluhamba phambili nolwabelana ngesondo lomzila weTV "iRashiya -2"
UMegan Markle, umtshakazi weNkosana uHarry, washintsha njani ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kweplastiki
Iingxowa ezikhuni kunye ne-shrimps
Inkcazo ngoFebruwari 23, 2017 kubafundi bezikole nabafundi bezikolo eziphakamileyo esikolweni. Isimo sokubambisana esilungileyo soMmeli woSuku lwe-Fatherland ngoFebruwari 23 kubazalwana abasebenza nabo kunye neNdlu yeNdlu yeNkcubeko
Imimmy kwi-cosmetology: inzuzo kunye nokulimaza iinwele kunye nekhumba
Abadumi be-Hollywood ababi kakhulu
I-salum ye-Pink ebongwe kwi-tomato sauce